कस्ताे अचम्मकाे रातो केरा, कहाँ पाइन्छ के-के छन् विशेषता - News 88 Post
रातो केराको बारेमा सुन्नुभएको छ?
हरियो, पहेँलो केरा त देखिएकै हो । के तपाइँले रातो रंगको केरा देख्नुभएको छ ? के रातो रंगको केरा पनि हुन्छ र ? भन्नुहोला । हाम्रो देशमा नभएपनि दुनियाका केही देशमा भने रातो केरा पाइन्छ ।
आउनुहोस एस्का फाइदा बुझौँ, जानौँ, र एस्को खेती गरौँ!!रातो केरा पाक्दा गहिरो रातो हुनुपर्दछ, र हल्का नरम भएको बेला खान सकिन्छ। यस प्रजातिमा पहेंलो केरा भन्दा धेरै मात्रामा बिटा क्यारोटीन र भिटामिन सी हुन्छ। यसले पोटासियम र फलाम पनि समावेश गर्दछ।
रातो रंगको केरा विशेषगरी अस्ट्रेलियामा पाइन्छ । अस्ट्रेलियाका साथै वेस्ट इण्डिज, मेक्सिको, जमैका, इक्वेडर लगायतका देशमा पनि पाइन्छ ।
रातो केराको यो प्रजाति सबैभन्दा पहिले कोस्टारिका देशमा फेला परेको थिए । अहिले पूर्वी अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकामा यसको सबैभनदा धेरै उत्पादन हुने गरेको छ र विश्वका विभिन्न देशमा निर्यात समेत हुने गरेको छ ।
यो केराको कोसा हल्का गुलाबी रातो रंगको हुन्छ भने स्वाद अन्य केराजस्तै हुन्छ । यसमा पर्याप्त भिटामिन सी का साथै क्यालोरी पनि प्रसस्त पाइन्छ ।
यसमा सोडियम तथा कोलेस्ट्रेाल हुँदैन भने म्याग्नेसियम तथा प्रोटिन पर्याप्त पाइन्छ । मुटु सम्बन्धी रोगीका लागि यो कुरा निकै लाभदायी हुने बताइन्छ ।
तिनीहरू एन्टिआक्सीडन्ट, भिटामिन सी, र भिटामिन बी मा धनी छन्। तिनीहरूले खाना, खाजा, र पौष्टिक मिठाससङै कम क्यालोरी तर उच्च फाइबर प्रदान गर्दछ। अन्य चीजहरू मध्ये, रातो केरामा रहेको पौष्टिक तत्त्वहरूले समग्र स्वस्थ आहारको एक भागको रूपमा खाएमा मुटु र पाचन स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सक्दछ।
एत्तिका फाइदा भएको रातो केरा खेती गरौँ, गुणस्तरीय बिरुवा सङै परामर्श चाहिएमा हामिलाइ सम्झनुहोस।
हिजोआज एसको खेति नेपाल मै गर्न थालिएको छ।
यी हुन् माधव नेपालको पार्टीले पाउने ५ मन्त्रालय (सूचीसहित)
आजको राशिफल हेर्नुहाेस् र पाथिभरा माताकाे दर्शन गर्नुहाेस्
March 30, 2021 March 30, 2021 N88
डा. बाबुराम भट्टराईको पेटमा रहेको ट्युमरको सफल शल्यक्रिया